Dive Spot - Gilimanuk Bay, Bali " Journey-Assist - Diving
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Dive spot Gilimanuk Bay
Dive spot Gilimanuk Bay
Ity helodrano ity dia 120 km miala an'i Denpasar, any avaratry ny tanàna, izay antsoina koa hoe Gilimanuk. Ny anarana mihitsy dia misy teny 2: "Gili" (nadika hoe "nosy kely"), ary "Manuk" ("akoho"). Noho izany dia midika hoe "Nosy Akoho".
Ireo bay dia manana ireto refy manaraka ireto:
Ny sakany dia efa ho 2 km.
Sahabo ho 1 km ny halavany.
Ny fidirana amin'ny bay dia 600 m ny sakany.
Amin'ny maha-toerana fisitrihana azy, raha ny filazan'ireo mpisitrika efa za-draharaha dia tsy io no mahaliana indrindra any Bali, fa ho an'ireo vao manomboka dia mety ho lohataona tsara ianarana izy io.
Ny toerana lehibe amin'ny fisitrihana dia ny ampahan'ny helodrano - ilay antsoina hoe Secret Bay
Any avaratra dia voahodidin'ny haran-dranomasina ny bay. Mikoriana ao aminy ny ranon'ny Selat Bali. Ny morontsiraky ny helodrano dia ahitana torapasika maromaro. Anisan'izany ny rakotra fasika fotsy sy mainty. Tsy feno olona ny torapasika rehetra eto an-toerana. Misy nosy kely 3 koa ao amin'ny bay - Kalong, Burgung ary Gadung.
Ao amin'ny helodrano, malemy ny riaka ankehitriny, fa amin'ny tery manasaraka an'i Bali sy Java, mahatratra knot 7 izy ary tena miovaova. Raha ny marina, ny Gilimanuk Bay sy ny tanàna manana anarana iray dia maneho ny vavahady andrefan'ny Bali. Ny morontsirak'i Java misy tampon-tendrombohitra maromaro dia azo jerena avy amin'ny seranana eo an-toerana, satria ny halaviran'ny Java dia 4 km fotsiny avy eto. Misy ferry iray manodidina azy sy Bali.
Ny hafanan'ny rano - manomboka amin'ny +20 ka hatramin'ny +26.
Malemy be na tsy eo tanteraka ny ankehitriny.
Tsy misy haran-dranomasina eto, ary ny ao anatiny rakotra fasika volkano fotsy na mainty ary vatokely lehibe. Manangona be eto koa ny potipoti-seranan-tsambo.
Ny toerana fisitrihana eo an-toerana dia eo akaikin'ny morontsiraka, ary ny fidirana mankamin'ity tranonkala ity dia eo akaikin'ny seranana seranan-tsambo, tandrifin'ny fiaran'ny sambo.
adiresy: Gilimanuk 82253, Bali, Indonesia
mandrindra: -8.170768, 114.436157
Diving any Gilimanuk Bay
Diving sy snorkeling ao Gilimanuk Bay
Helodrano Gilimanuk amin'ny sari-tany